Indlela yokusebenzisa i autoclave ekhaya ukuwafaka: imfundo, ukuwafaka iresiphi
Omama abaningi abasemakhaya bekwi ukuwafaka ngokuba imifino ebusika kanye nezithelo. Kodwa ukulungiswa inyama noma inhlanzi okusemathinini ngaphansi amandla ezimbalwa, njengoba kunjalo kuyinto enzima futhi ekhaya exigeant. Ukuze sibhekane nale nkinga, ungasebenzisa idivaysi ekhethekile. Ukuze uthole ukwaziswa sendlela ukusebenzisa autoclave, ukumboza kulesi sihloko. Lapha siphawula izinyathelo ukusebenza kwayo, nilethe iresiphi esiphundu izinhlanzi amathini.
I autoclave yidivayisi senzelwe ukupheka (ukuwafaka) imikhiqizo ngokubeka amalahle nabo ngaso ngenhla umfutho womoya. amadivaysi Okufanayo kusetshenziswa imithi inzalo amathuluzi kanye ukuwafaka workshop ukulungiswa ezihlukahlukene ukudla okusemathinini. Ngaphandle, idivayisi sifana ingcindezi cooker ezinkulu noma epanini ngesivalo ezikubambayo.
Indlela yokusebenzisa i autoclave ekhaya? isimiso sayo ukusebenza ukuthi ukunwetshwa imikhiqizo wamabhange (inyama, inhlanzi, izithelo, imifino) roll zensimbi zamabhodlela, ibekwe grille ekhethekile futhi babekwa uphawu. autoclaves Modern emsebenzini futhi ehamba igesi futhi ugesi. Zingasetshenziswa hhayi kuphela ukwenza isagcine okuzenzela, kodwa futhi inzalo compotes, sezimoto, ayo, ukhukhamba nokunye. D. Kodwa into ebalulekile ukuthi yonke imikhiqizo azinamagciwane kusebenziswe futhi botulism amagciwane eziqukethwe inhlanzi eluhlaza, zibulawa ngaphakathi imizuzu umsebenzi 20 autoclave.
Ilungiselela ukusetshenziswa autoclave
I sokulondoloza Imiphumela ophumelelayo ukulungiselela efanele imikhiqizo kanye autoclave ukusetshenziswa. Kulandzelana kwalokucuketfwe lokuhleliwe izenzo kulesigaba kanje:
Ngokuhambisana iresiphi udinga ukuthatha imikhiqizo friendly futhi ukupakisha nabo ngokweseluleko usayizi ofanayo amabhange.
Roll izimbiza zensimbi zamabhodlela nge ukuwafaka ukhiye bese ufake nabo omncane bahlala endaweni yokubeka noma ikhasethi autoclave.
Ukusebenzisa clamping ekhethekile amabhange nuts kumele kuvikelwe ukuze babephephile, futhi ningathinti nomunye. Indlela yokusebenzisa autoclave esilandelayo?
Ngemva umsebenzi wokwenza amalungiselelo kanye namabhange, umshini ogibele isitofu igesi noma exhunywe kwi-amapayipi.
A crane ekhethekile ukuba agqoke futhi wabophela a amanzi hose ngocingo yamanzi ngokweqile. Iphinde kufanele wasigcobhoza esitsheni kwamanzi ahlanzekile.
Thela amanzi phakathi autoclave ukuze amabhange bacwiliswa ngokuphelele kulo (mayelana 30 L).
Vala lid autoclave futhi uhlole ukuvuza.
Kungaleso sikhathi kuphela lapho ungakwazi uqhubekele ukuwafaka.
Indlela yokusebenzisa i autoclave ekhaya ukuwafaka
Ngesikhathi sigaba kulungiselelwa ukudla okusemathinini kubalulekile ukuqapha ingcindezi ngaphakathi emshinini futhi banamathela ubuchwepheshe kanye iresiphi. Indlela yokusebenzisa i autoclave ekhaya ukuwafaka? Kulandzelana kwalokucuketfwe lokuhleliwe izenzo simiswe ngalendlela lelandzelako:
Phemba igesi futhi ulethe autoclave ngaphansi kwengcindezi ngaphakathi iinsetjenziswa 0,32-0,39 MPA, okuhambelana lokushisa 110-120 degrees. Ukushisa kuthatha cishe 1-2 amahora isikhathi.
Londolozani ingcindezi ezingeni predetermined phakathi kwenqubo inzalo. ubude bayo incike izici imikhiqizo ethile futhi kufakwa ohlwini ku iresiphi.
Ngemva kwesikhathi off igesi noma igcinwe kusuka lapho uphuma khona. Ungavuli kwesembozo somphongolo autoclave kuze, kuze kube yilapho selehlile ngokuphelele. Ngaphambi ukuyivula ukuqinisekisa ukuthi ingcindezi ngaphakathi idivayisi iku 0 MPA.
Susa eseqedile izimpahla ezifakwe emathinini kusukela autoclave nabanye futhi wathumela kuJehowashi isitoreji ngendlela omnyama, endaweni epholile.
siphephe lokha abafundi basebenza autoclaves
Uma upheka ukudla autoclave kumele zithobele iziqondiso ezilandelayo:
Ungavuli iyunithi lapho ingaphansi kwengcindezi.
Ungafaki i autoclave, uma engawenzi ugcwalise amanzi.
Musa idlule ingcindezi elicacisiwe imiyalelo.
Kungenzeka ingasetshenziswa abilayo izimbiza amalebula.
Phakathi nomsebenzi we-autoclave akuvunyelwe ukuba emaceleni, ukuhambisa, noma uthinte evele ashisayo.
Indlela yokusebenzisa autoclave for ukulondolozwa zezinhlanzi: iresiphi
I autoclave kulula futhi okusheshayo ukulungiselela izinhlanzi esihlwabusayo elimnandi emafutheni zemvelo. Kwaphela isigamu-litre jar kudingeka 0.5 kuphela kg ukugeza oqoshiwe zibe izingcezu 50 g izinhlanzi, i-bay leaf, pepper, uwoyela zemifino (1 tbsp. Spoon) nosawoti (1 ihora. Spoon). Zonke izithako ezibekwe embizeni ukuze kwaba 2-3 cm. Tight is hhayi Kunconywa ukuba abuqede izinhlanzi emaphethelweni. Indlela yokusebenzisa i autoclave ekulungiseleleni inhlanzi okusemathinini?
Ukuze wenze lokhu, amabhange kanye izinhlanzi iphuma isivalo bese usetha phezu hlupha iyunithi. Ngemva kwalokho, zisuthe ngokuhle amanzi, ukuvala kwesembozo somphongolo autoclave futhi inzalo inqubo iqala. Ukupheka isikhathi kuxhomeke kulindeleke athambe kahle ukuze bathole izinhlanzi. Ngokwesilinganiso inzalo namakani Uthatha imizuzu engu-30 kuya ku-50. Ngaphambi kokuqala okusemathinini kusukela autoclave, kubalulekile ukulinda indlu ephelele.
Indlela ukuhlela ikhishi lakho: tesakhiwo, imibono ezithakazelisayo kanye nezincomo ochwepheshe
Susa rust iyiphi izitsha usebenzisa amazambane!
Börner (Slicer): Izibuyekezo ikhasimende
Umzingeli Born - Weimar Isikhombi
Biography Kate Gosselin: umndeni, izingane kanye namaqiniso athakazelisayo